Ahoana ny fomba hamohana sy hamerenana angona avy amin'ny finday misy efijery tapaka miaraka amin'ny OTG - Ikkaro
firosoana >> fanamboarana >> Ahoana ny fomba hamohana finday amin'ny efijery vaky
Amin'ity lahatsoratra fanamboarana ity dia ho hitantsika ny fomba mamoha finday iray izay tapaka ny efijery hidirany amin'ny kapila mafy ary afaka mamindra sy mamerina rakitra, sary ary horonan-tsary. Fotoana vitsy lasa izay ny vadiko dia nandatsaka ny telefaoniny tamin'ny BQ Aquaris E5 ary vaky ny efijery, toa tsy dia tafahoatra mihitsy izany, fa ny tapany ambany kosa tsy mandeha. Afaka mahita azy ianao fa tsy afaka mampiasa azy. Ary tonga ny olana. Tsy afaka namoha ny finday izahay satria tsy mamaly ny mikasika ilay faritra misy ny lamina. Ary mazava ho azy fa tsy afaka miditra amin'ny kapila mafy isika ary maka ny sary sy horonan-tsary izay notehiriziny.
Nandinika safidy maro aho mba hahafahako maka sary. Ovao ny efijery, rindrambaiko be dia be izay manapaka ny lamina sy ny fomba voafantina, ny tariby OTG, Manova ny efijery amin'ity tranga ity no safidy lafo indrindra, satria ny fanoloana an'io dia tsy mora ary satria ny telefaona dia nanana taona maro nanapahantsika hevitra fa ovay ho vaovao ity. Miezaka manangona ny vaovao ato amin'ity lahatsoratra ity aho ary mamela horonantsary mampiasa ny tariby OTG.
Manana tranga maromaro isika:
Raha hita ny efijery na dia tsy mandeha aza
Araka ny nolazaiko fa nijery safidy maro aho ary tamin'ny farany ny tsotra indrindra dia ny mividy tariby OTG. Tariby 2 € (azonao atao ny mividy azy eto) izay ampifandraisintsika ny totozy ary azontsika atao ny manisy marika ny lamina hamonoana azy ary avy eo hivezivezy ao anatiny raha tiantsika. Amin'ity tranga ity dia OTG vehivavy izy io
OTG no fanafohezana ny hoe On The Go, ary fanitarana USB 2.0 izay ahafahantsika mampifandray ireo peripheraly USB amin'ny fitaovantsika hahafahantsika mametraka totozy eo aminy ary mivezivezy tsotra fotsiny toa ny solosaina.
Manamarika ny patŕon isika amin'ny fihazonana ny bokotra ankavia. Avy eo hamakivakiana ny terminal, manokatra rindranasa na menus miaraka amin'ny bokotra ankavia izahay ary manidy amin'ny ankavanana.
Tsotra sy mahasoa daholo. Satria ny OTG dia azo ampiasaina ho an'ny mobiles izay miasa tsara amin'ny alàlan'ny fampifandraisana tafo amin'izy ireo, na mikraoskaopy nomerika USB toa ilay azoko tato ho ato.
Fantatrao izao. Raha mila mamoha finday misy efijery vaky ianao dia zahao raha manaiky OTG ny findainao ary ampifandraiso ny totozy.
Ary ity no izy, raha tianao izany, misoratra anarana ary mametraha hevitra milaza ny zavatra niainanao
Amin'ny efijery mainty, tsy mandeha izy
Tranga iray hafa dia ny fijanonan'ny efijery miasa ho anao. Misy rindrambaiko saingy miaraka amin'izay rehetra hitako fa tsy maintsy ampandehanana ny maody debugging USB ary mazava ho azy, saika tsy misy olona manana azy io, ka amin'ny farany tsara kokoa ny mijery raha misy efijery mora vidy ao Shina.
Rindrambaiko hiditra amin'ny finday voasakana:
EaseUS MobiSaver ho an'ny Android
Mbola mitady rindrambaiko vitsivitsy ahafahako miditra amin'ny kapila mafy. Raha fantatrao ny fomba, rindrambaiko, lahatsoratra, fampianarana na inona izany, dia avelao ny fanehoan-kevitra ary noho izany dia manoratra sy mamita ny lahatsoratra izahay mba hahafahan'ny olona miasa araka izay tratra.
Fanehoan-kevitra 2 momba ny "Ahoana ny fomba hamohana finday misy efijery vaky"
16 Janoary 2019 tamin'ny 7:38 maraina
Salama, inona ny fampiharana fakana sary tsara indrindra ho an'ny Android6? Manana finday Motorola 3 aho ary tsy mandeha tsara ny iray amin'ireo bokotra. Misaotra betsaka.
16 Janoary 2019 amin'ny 1:07 hariva
raha mila maka pikantsary ianao dia andramo https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mdiwebma.screenshot
Raha ny tianao dia ny mampiasa an'io bokotra simika simba io eo amin'ny efijery dia andramo